होचा–होचा कदका, ठिक्कको जिउडाल। शिरमा ढाका टोपी, जिउमा कमिज सुरुवालको सामान्य पहिरन, जाडो महिना भए कमिजमाथि स्वीटर र कोट पनि, घाँटीमा मफलर। कुममा कपडाको एउटा हलुको झोला। झोलामा आफैंले लेखेका दुई–चार थान स–साना पुस्तक–पत्रिकाको खात र एउटा डायरी। कोही मान्छे सम्मुख पर्नासाथ अधरमा स्मित मुस्कानद्वारा स्वागत गर्ने उज्यालो अनुहार। मृदु मसिनो बोली। छोटो संवाद। सधैँ एकनास, सधैँ उस्तै– श्यामप्रसाद।
म्याट्रिक याने एसएलसी धरि पास हुन नसकेका तर, मान्छे भने लेखक! पत्रकार पनि। ३३ वर्षकै उमेरमा सन् १९६२ मा बुडापेस्ट (हङ्गेरी) मा सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महाधिवेशनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो नेपाली पत्रकार। त्यो महाधिवेशनमा ‘अ रिपोर्ट अन जर्नालिज्म एण्ड जर्नालिस्ट्स अफ नेपाल’ (नेपालको पत्रकारिता र पत्रकारहरूबारेको प्रतिवेदन, २०१९) प्रस्तुत गरी तिनताका नेपालमा भएरहेको वाक तथा प्रकाशन अधिकार र स्वतन्त्रताको स्थिति छर्लङ्ग पारिदिए। शस्त्रास्त्रको विशाल भकारी ठड्याएर संसारलाई आतङ्कित पार्ने र शान्ति र अमनचैन खलबल्याएर आफ्नो हैकम जमाउने साम्राज्यवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिँदै विश्व शान्ति तथा निरस्त्रीकरणका प्रबल पक्षधर बने। २०१९ सालमै मस्को (रुस, तत्कालीन सोभियत सङ्घ)मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता जनाउन समेत भ्याइसकेका– श्यामप्रसाद। लेखक इस्माली
लेखक पनि ठूलै लेखक भए उनी। जुन धार समातेर लेखे, त्यसको अगुवा लेखक नै भए। त्यही धारका लेखकको सङ्गठक पनि बने र जन्माए– प्रगतिशील लेखक सङ्घ, २००९ सालमा। नेपालका लेखकहरूको पहिलो सङ्गठन थियो त्यो। २०१७ सालपछि त्यो निष्क्रियप्रायः भयो र ३६ सालपछि प्रलेक संघ हुँदै २०४४ सालमा यसले पूनर्जीवन पायो। र, एकपटक फेरि उनले त्यस सङ्घको अध्यक्षता सम्हाले। मानवमुक्तिको गोरेटो बनाउने धार समाते। वर्गीय विभेद निमिट्यान्न पार्न आजीवन लागि परे। मानिस जातिलाई विभिन्न जातथरमा विभाजन गरेर ‘तँभन्दा म ठूलो, त्योभन्दा यो श्रेष्ठ’ भन्ठान्ने विभेदकारी सामाजिक परिपाटीजन्य चेतनाप्रति तीव्र असहमति जनाए र मानिस सबै एउटै हुन्, कर्म र तिनमा रहेको कल्याणकारी समाजोपयोगी भावनाले मात्र तिनलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, अरूभन्दा अग्लो बनाउँछ भन्ने चेतनाको प्रवाह गर्दै ‘जात जातिया खँय/जात जातके बात/जात–जातिका कुरा’ बुझाउँदै नेवारी, हिन्दी र नेपाली गरी तीनवटा भाषामा पुस्तक लेखे। आफ्नो नाममा जातथर कहिल्यै लेखेनन् उनले, मात्र लेखे नाम– श्यामप्रसाद। ललितपुरको सोलीथुमको थुम्कोमा जन्मे। हुतकुमारी अधिकारी र जोगनाथ उपाध्याय लामिछानेका एकल सन्तान। गरीब बाहुनको परिवार। पहाडको ठाउँ, नाममात्रको थोरै जग्गाजमिन। खानलाउन सँधै धौधौ। आजित भएर जोगनाथ झरे मधेस– वीरगन्ज, कामको खोजीमा, दुइटी श्रीमती, पाँच वर्षे बालक बोकेर। गहवाको बास भयो। बहादुर शमशेरको मौजाको रेखदेखको काम। पहाडको मान्छे, मधेसको औलो गर्मी! गरिबीले गालेको छँदै थियो, त्यसमाथिको औलो गर्मी। थल्यायो हुतकुमारीलाई। ‘कालेका बा, मेरो त लेखान्त सकिएजस्तो भो। दिदी, यो काले तिम्रो जिम्मा!’ चोला उठ्यो आमाको। बालवयमै टुहुरा भए श्यामप्रसाद।
घरमै साक्षर बनाएर भाषा पाठशालामा भर्ना गरिदिएपछि किशोर छोरालाई घरव्यवहार सुम्पेर पिता जोगनाथले पनि बाटो तताए। आर्थिक अभावले पहिलेदेखि नै फिटफिटी पारेर पाठशालाको पढाइ हापिसकेका उनी हातमुख जोर्ने मेसोको खोजीमा भाउन्निए। वीरगञ्ज–अमलेखगञ्ज रेल (एन जी आर रेलवे, नेपालको पहिलो रेलसेवा) मा डब्बाडब्बा चहार्दै किताब, पत्रिका बेचे, ट्युसन पढाए, चिठ्ठीपत्र लेखिदिने/पढिदिने पनि गरे। माइथान बजारमा एउटा दोकान खोले। पाठशाला पढ्न नपाएकाले हो कि आफ्नो किताब पढने धोको मेट्न उनले किताबकै दोकान खोले– सेवा सदन। रक्सौलबाट उधारोमा किताब ल्याउँथे टिनको बाक्सा र बोरामा हालेर। पसलमा सजाउँथे माथि माथि देखिने ठाउँमा धार्मिक र चलनचल्तिका किताब अनि भित्रभित्र राहुल सांकृत्यायन, यशपाललगायतका विप्लव प्रकाशनका क्रान्तिकारी किताब। सेवासदनबाट २–४ पैसा जोगाएर आफ्नो पढ्ने धोको मेट्न फेरि पन्ध्र वर्षे उमेरमा ५ कक्षामा भर्नाभए त्रिजुद्ध हाइस्कूलमा। अज्ञान र अविवेकको अँध्यारोमा रुमल्लिइरहेका मानिसमा चैतन्यको खेती गर्न स्कूल छुट्टी हुनासाथ सेवासदनको ढोका खोलिहाल्थे र पसलमा ग्राहक नहुँदा लुकाएर बेच्ने गरेका किताब पढेर बस्थे। त्यतिमात्र कहाँ हो र, मनले खाएका साथीहरूलाई पनि रातिराति पसलको ढोका थुनेर ती किताब पढन लगाउँथे श्यामप्रसाद। सेवासदनमार्फत् सेवा गर्दागर्दै उनी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अभियन्ताहरूको सम्पर्कमा पुगे। र, ०३ सालमै वीरगञ्जभरि राणाशासनविरोधी पर्चा छरेर तत्कालीन शासनसत्ताको अमनचैन खल्बल्याइदिन पनि भ्याए। उनताकै उनी किसुनजी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्ण शमशेर, गणेशमानआदिको सम्पर्कमा पनि पुगे। यही सम्पर्कले उनलाई राजनीतितिर डोहो¥यायो। आफ्ना दौँतरी–साथीहरूलाई नेतृत्व दिँदै ०४ सालको सत्याग्रहमा उत्रेका, जेल परे। छोटै अवधिमा पटकपटक जेल परे उनी। जेलमा उनले भेटे कवि युद्धप्रसाद मिश्र, कवि गोपाल प्रसाद रिमाल, धर्मरत्न यमी, सूर्यबहादुर भारद्वाजजस्ता क्रान्ति अभियन्ताहरूलाई। यही काङ्ग्रेसमार्फत् उनको चिनजान भयो पुष्पलालसँग। पढाइ लथालिङ्ङ भयो। तै पनि म्याट्रिकको परीक्षा त दिनुप¥यो भनेर आफू पढेको स्कूलमा पुगे। तत्कालीन हेडसर मदनमणि माड्साबले विन्तिपत्र लेखेर माफी मागेपछि मात्र पढ्न पाइने सर्त तेस्र्याएपछि मोतिहारी पुगे म्याट्रिक जाँच दिन– स्वाभिमानी श्यामप्रसाद। प्रवेशिका उत्तीर्ण नभएर के भो र! प्रकृति र जगतको खुला पाठशालाका शिक्षार्थी बन्न कसले पो रोक्न सक्छ र? प्रकृतिको खुला विद्यालय र सेवासदनका मनको ढोका खोलिदिने पुस्तकहरू पढ्दै वीरगञ्जका गोर्कीको मोहभङ्ग भयो काङ्ग्रेसबाट। ०७ साले क्रान्तिले जनतालाई पूर्ण मुिक्त दिन नसकेको, दिल्ली सम्झौता धोकापूर्ण रहेको बोध हँुदै गयो उनलाई र नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिको बाटो वर्गसंघर्ष मात्र हुन सक्दछ भन्ने चेतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित हुन पुगे। अनि काठमाडौँ र वीरगञ्ज उनको कर्मथलो बन्यो। पार्टीको पहिलो महाधिवेसनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी बनी वीरगञ्ज नगरकमिटीको सचिव बने श्यामप्रसाद। राजनीति र साहित्यमा समानान्तर यात्रा गरिरहेका उनले सन्देश, कोसेली, साहित्य, सेवा, स्वास्नीमान्छे जस्ता साहित्यिक र राजनीतिक, हस्तलिखित र छापा पत्रिका निकाल्नुका साथै आन्दोलनलाई सघाउन भूमिगत सङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्ने गर्दथे। भूमिगतकालमा विभिन्न छद्म नाममा उनले साहित्यको सेवा गरे भने विभिन्न विधाका आकार र पृष्ठसंख्याका हिसाबले साना–ठूलागरी मूलतः नेपाली अनि नेवारी, हिन्दी, अङ्ग्रेजी आदि भाषामा समेत गरी झण्डै सवा सय कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। कतिपय अझ पनि अप्रकाशित छन्। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपाली र पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन् श्यामप्रसाद।
समयको अचुक पाबन्दीमा चल्न रुचाउने उनको ‘एक घण्टा बिताउन ’, ‘तँ, तिमी, तपाइँ, हजुर’, ‘लेखक कसरी बन्ने?’, साहित्यसम्बन्धी दुईचार कुरा, प्रेम, विवाह र महिला मुक्ति, श्यामप्रसादका निबन्धहरू आदि निकै उल्लेखनीय कृतिहरू हुन्। महत्वपूर्ण घटना र गतिविधि आदिको नियमित अभिलेखन उनको अर्को विशेषता हो। यसबाट ८–१० वटा कृति बनेका छन् उनका। साहित्य, संस्कृति, धर्म, जातजाति, भाषा, वर्गीयता, परिवार नाता कुटुम्ब, महिलामुक्ति, बालबालिका, मजदुर श्रमजीवी, शिक्षा, स्वास्थ आदि उनको लेखनीको केन्द्रविन्दु रहेको पाइन्छ। विषय वैविध्य विशेषता हो श्यामप्रसादको।
आँखामा राखे पनि नबिझाउने उक्तिलाई सार्थक पार्ने उनको व्यक्तित्वको लोभलाग्दो र लोमहर्षक चित्र उतारेका छन् वरिष्ठ कथाकार रमेश विकलले ‘ज्ञानी मामा’ मा। कतिपय पत्रिकाले उनको व्यक्तित्व र कृतित्वमा केन्द्रित भएर विशेषाङ्क प्रकाशित गरेका छन्, शोधपत्रहरू लेखिएका छन्। कतिपय सङ्घसंस्थाहरूले उनको अभिनन्दन गरेका छन्, विभिन्न पुरस्कार र सम्मानद्वारा सम्मानित गरेका छन्। आफ्नो जीवनकालमै यतिको सम्मान र माया पाउने नेपाली लेखकहरू औँलामा गनिने सङ्ख्यामा मात्र छन्, त्यस्तै विरलमध्येका एक हुन् श्यामप्रसाद। समाजलाई उज्यालोतिर डोहो¥याउने अभियानमा, अग्रगामी समाजको निर्माणमा आजीवन लागि परेका उनको वैवाहिक जीवन भने असफल र विवादमूक्त नरहेको देखिन्छ। उनको पहिलो विवाह चाबहिल काठमाडौँका वाग्ले थरकी कन्या पुनु वाग्लेसँग भयो। यो मागी विवाह थियो। आमा (जेठी आमा/ठूली आमा) र मामाको छनोटको कन्यासँग भएको विवाहलाई पत्नी अपठित, परम्परावादी भएकीले उनले आफैंले झण्डै दशकपछि एकतर्फी बदर गरे। पछिसम्म पनि पहिली पत्नीले उनीसँग घरजमको एकाङ्गी सपना देखिरहिन्। अन्ततोगत्वा उनको बास वृद्धाश्रममा भयो र त्यहीँ तिनले २०६३ सालमा मानव चोला छोडिन्। पछि उनले वर्गीयता नै नमिलेकी अभिजातीय युवती शशिकला नेपालसँग प्रेम विवाह गरे। दुइटी छोरीहरूको जायजन्म भएर पनि यो विवाह टिकेन। दोश्री पत्नी शशिकलाले नै उनलाई छाडिदिइन्। उनलाई माया गर्ने पहिली पत्नीलाई उनले रुचाएनन्, उनले माया गर्ने दोश्री पत्नीले उनलाई रुचाइनन्। पछि शशिकलाले पश्चिमतिरका एकजना कृषि प्राविधिकसँग घरजम गरिन्। र, २०६३ सालमा उनी पनि यस धरतीबाट विदा भइन्। यसरी दुई–दुईजनासँग विवाह गरेर पनि पत्नीविहीन जीवन बाँच्नेमा परे– श्यामप्रसाद।
ललितपुरमा जन्मेका उनी जन्मथलोका हिसाबले मकवानपुरे भए। किनकि, २०१८ सालको जिल्ला विभाजनमा उनको जन्मथलो सोलीथुम मकवानपुरको भागमा प¥यो। वीरगञ्ज छाडी काठमाडौँ आएपछि २०२४ सालमा स्व–निर्वासनमा रहे वा राखिए र २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि मात्र उनी बहिर्गत भए। २४ वर्षको त्यो अवधिमा वीरगन्ज गहवाको घरघडेरीमा अर्कैले झण्डा गाडिदियो र उनी घरबार भएर पनि घरबारविहीन सर्वहारा भए। विचारका हिसाबले त उनी सर्वहारा वर्गमा छँदै थिए, अब उनलाई समाजको जालीझेली फटाहाले पुख्र्यौली घरबाट पनि अपदस्थ गरिदियो। लामो झै–झमेला खेप्दै अनेकन हण्डर खाँदै बल्लतल्ल त्यो माखेसाङ्लो चिर्न भ्याए र फेरि पनि घरबारविहीन सर्वहारा नै बने श्यामप्रसाद।
लामो अज्ञात बासपछि बहिर्गत भएका उनीउपर उनका शुभेच्छुहरू निकै आशामुखी भए। वर्गीय समाजमा साहित्यको स्वरूप पनि वर्गीय हुन्छ, जनताको महत्व स्वीकार गरेर लेखिएको साहित्य नै वर्गीय साहित्य हो भन्ने श्यामप्रसाद निरङ्कुश राजाका नाममा स्थापित पुरस्कार लिन हौस्याइए, हौसिए। मान सम्मान र पुरस्कार नपाएका थिएनन् उनले र पनि जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी शासनसत्ताका मतियारहरूका नाममा राखिएका पुरस्कार लिन आतुर भए। उनले जग हालेर आरम्भ गरेको आन्दोलनका कतिपय समर्थक–शुभेच्छुकहरूले आग्रह गरे, ‘तपाईं यस्तो दागी पुरस्कार नलिनुस्, तपाईंको त्याग तपस्या र वलिदानको सगरमाथाबाट खुरमु¥याएर भुइँमा लोटाउने, तपाईंको व्यक्तित्वमा धमिरा लगाउने यस्तो पुरस्कार हातमा नथाप्नुस् ...।’ तर उनलाई आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकहरूको त्यस्तो सल्लाह–आग्रह मन परेन। अर्काथरी समर्थक–शुभेच्छुकहरूले आडभरोसा दिँदै भने, ‘ती सब जडवादी हुन। त्यस्तो पुरस्कार लिएर बिटुलिने र नलिएर चोखिने, क्रान्तिकारी भइने माक्र्सवादको कुन ग्रन्थमा लेखिएको छ?’ त्यसपछि पहिलाथरीले भने, ‘त्यस्तो पुरस्कार लिने तपाईंको इच्छा नै छ भने प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्षको पदमा रहेर कम से कम त्यो दागी कुरो नथाप्नुस्, अध्यक्षबाट राजिनामा गर्नूस अनि मात्र थाप्नुस्।’ तर उनले त्यो सल्लाह पनि उचित ठानेनन्। आफ्नो समग्र लेखनमा अग्रगामी राजनीतिक चेतनाको कुरो गर्ने उनी यसबेला ठ्याक्कै अराजनीतिक बने। त्यसपछि सम्पन्न भएको प्रगतिशील लेखक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो विवादले चर्को रूप धारण ग¥यो। यो विवादलगायत नेतृत्व चयनको समेत विवादले एमाले पक्षधरबाहेक सबै पक्षका लेखकले त्यो सम्मेलन बहिस्कार गरे। गोविन्द भट्टको अध्यक्षतामा सम्मेलनले एमालेपक्षीय नेतृत्व चयन ग¥यो र प्रलेसको त्यो सम्मेलन प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनको इतिहासमा ध्वाँसोमय बन्न पुग्यो। हो, यहीँनिर बोध गरे मान्छेले, ‘चुके वा चुकाइए –श्यामप्रसाद।’ उनी २०२४ सालमा स्वनिर्वासनमा गए र २४ वर्षपछि मात्र बहिर्गत भए। यो २४ वर्षको अज्ञात बास दुनियाँले देख्दा उपलब्धिविहीन रहेको लाग्दछ। यो अज्ञात बासले अघिल्लो श्यामप्रसादलाई भुत्ते बनाइदियो भन्नेहरू नै धेरै देखिए। ३८ औँ वर्षदेखि ५२ औँ वर्षको उमेरसम्मको ऊर्जाशील समय उनले त्यसै खेर फालेजस्तो लाग्यो अरूलाई। र त, भने – बरा, श्यामप्रसाद! चन्द्रमाको साह्रै प्रशंसा हुने गर्दछ रुपवादी लेखनमा। शक्तिको अजस्र श्रोत सूर्यको महिमागान पनि अनन्त छ। सूर्य र चन्द्रमाको हामी पूजा पनि गर्दछौँ। अनि यसो पनि भन्दछौँ– ‘सूर्य चन्द्रमा पनि त दाग छ।’ र, पनि चन्द्र सूर्यलाई पुजिरहन्छौँ। नेपालीको औषत आयूसँग तुलना गर्दा उनको झण्डै ८८ वर्षको वय लरतरो आयू होइन। जीवनको उत्तरार्धमा कुनै थुम्काथुम्कीमा अझल्टिएर लोटे, लुगामा लागेको धूलो टक्टक्याए र पनि अविराम यात्रामा हिँडिरहे। कतिपय अग्रजझैँ उनी आपूm हिँडेको पुरानो बाटोलाई धिक्कार्दै सत्तोसराप गर्दै वैगुनी र खलहरूको बगालमा मिसिन गएनन्। १९८६ असार ६ देखि सोलीथुम, मन्थलीबाट जीवनको यात्रा थालेका उनी चेत खुलेर बाँचुन्जेल वाममार्गी भएरै बाँचे र प्रगतिवादी लेखक भएरै २०७४ बैशाख २४ आइतबारका दिन विस्मृति (अलजाइमर)बाट रोगाक्रान्त भएर यस धरतीबाट विदा भए– श्यामप्रसाद।
उनको जीवनलाई २४ को गणित घरिघरि चियाइरहेको देखिन्छ। जन्म साल १९८६ का अङ्कहरूको जोडफल २४, २४ गतेकै दिन बिते, २४ सालदेखि २४ वर्ष नै अज्ञातबास बसे। सङ्ख्याशास्त्रमा त्यसको अर्थ जे होला, उनले कोरेको प्रगतिवादको गोरेटो अहिले खस्रो पिचजस्तो राजमार्ग बनेको छ। उनको अवसानले नेपालको प्रगतिवादी पहिलो पुस्ताको लगभग अन्त्यप्रायः भएको छ। ‘जीवनको यथार्थ साहित्यको आधारभूमि हो। जीवन लक्ष्य यसको आदर्श हो। विचारको परिस्कृत रूप साहित्य हो।’ उनी भन्ने गर्दथे। त्यही विचारको परिस्कृत रूपमुखी राजमार्ग अझ लोभलाग्दो बनाउन वर्तमान पुस्ताले योगदान गर्न सकोस्। यही नै साँचो अर्थको श्रद्धान्जलि हुनेछ, अग्रज सर्वहारा अभियन्ता श्यामप्रसादप्रति। प्रकाशित मिति:
शनिबार, बैशाख ३०, २०७४ ११:५७:५२